एकोहोरो शङ्ख मृत मान्छेलाई मसान घाट तिर लग्दा मात्र बजाईन्छ किन ? यस्तो छ भित्रि कारण - सुदूरखबर डटकम
एकोहोरो शङ्ख मृत मान्छेलाई मसान घाट तिर लग्दा मात्र बजाईन्छ किन ? यस्तो छ भित्रि कारण
मलामी जाँदा “एकोहोरो” शङ्ख किन बजाइन्छ ? शङ्ख ध्वनि वातावरण शुध्दताको लागी प्रयोग गरिन्छ । यस्को ध्वनिले वातावरणमा भएका किटाणुहरुको विनाश गर्नुको साथै यस्को ध्वनिले वातावरणमा अत्याधिक मात्रामा साकारात्मक उर्जा प्रवाहित गर्छ ।
शङ्ख बजाउनाले मुटु, श्वास-प्रश्वास, पेट सम्बन्धि रोग हरु लाग्दैन । घरको वास्तु दोष ठीक गर्छ र ज्योतीषिय विज्ञानको अाधारमा भन्ने हो भने शङ्ख बजाउनाले गुरु ग्रह बलियो हुन्छ ।
जब अात्माले शरीर छाड्छ । शरीरमा भएका किटाणु वातावरण मा नफैलियोस र वातावरणमा भएका किटाणुहरुबाट मृत-शरीरमा अाक्रमण हुन नदिनको लागी शङ्ख बजाइन्छ ।
अझ शङ्खको एकोहोरो ध्वनिले धेरै मात्रामा काम (प्रभाव) गर्ने भएकोले एकोहोरो शङ्ख बजाइन्छ । एकोहोरो शङ्ख बजायो भने अलच्छिन लाग्छ भन्ने धारणा गलत हो ।
कैलालीकी एक महिलाले जन्माइन् ‘तिम्ल्याहा’ सन्तान
कालाशैनी क्रिकेट क्लव बन्यो बिडीसिए कपको च्याम्पियन
निर्मला हत्या अनुसन्धानमा गल्ती भेटिए बर्दी खोल्न तयार छु :…
बैतडी र दार्चुलामा ओखरको बगैँचा स्थापना गरिने
पहिलाे टेस्ट क्रिकेटमा भारत ३१ रनले विजयी
स्याउ फल्ने ठाउँ सिकाइ केन्द्रको रुपमा स्थापित हुँदै